Ogaysiis Kordhinta Qiimaha!!!
Sannadkii hore, dawladda Shiinaha ayaa si rasmi ah u shaacisay in Shiinuhu uu rajaynayo in uu gaadho heerka ugu sarreeya ee qiiqa ka hor 2030-ka iyo in la gaadho dhexdhexaadnimada kaarboonka ka hor 2060, taas oo ka dhigan in Shiinuhu uu haysto 30 sano oo keliya 30 sano si joogto ah oo degdeg ah. Si loo dhiso bulsho masiir guud ah, dadka Shiinaha waxay...
Ogeysiiska "nidaamka kontoroolka isticmaalka tamarta"
Dhammaan Macaamiisha qaaliga ah, waxaa laga yaabaa inaad dareentay in siyaasadda dawladda Shiinaha ee "laba xakameynta isticmaalka tamarta" ay saameyn gaar ah ku yeelatay awoodda wax soo saarka ee shirkadaha wax soo saarka qaarkood. Laakin fadlan hubi in shirkadeena aysan la kulmin dhibaatada lim...
Kaydka Jinan Black Granite wuu yaraanayaa waana yaraanayaa
Kaydka Jinan Black Granite wuu yaraanayaa oo wuu sii yaraanayaa, sababtoo ah siyaasadda deegaanka, macdanta qaar ayaa xidhan. Kaydka Jinan Black Granite wuu yaraanayaa waana yaraanayaa. Iyo qiimaha Jinan maaddada granite madow waxay noqotaa mid sare iyo sare. Sanad kadib...
Saxanka Granite Cube, Granite saxda ah, Epoxy Concrete, Mashiinka Dheelitirka Horizontal, Isbarbardhigga Granite Saxda ah, Saxnimada Granite Square Ruler,